Iyiphi i-TV ozoyithenga (amathiphu wokukhetha kahle) | Izindaba zamagajethi
Iyiphi i-TV ongayithenga (amathiphu wokukhetha kahle)
UJoseph Alfocea | | Ama-TV
Ngenkathi ngisemncane, futhi ngifunga futhi ngiqamba amanga ngithi angimdala kangako, endlini yami kwakukhona ithelevishini emnyama nomhlophe, ngaphandle kwezinkinobho, enamasondo ayekuvumela ukuthi utshale ngokunemba okuncane "iketanga lokuqala" kanye "ne uchungechunge lwesibili »KweSpanish Television. Zazingekho iziteshi zethelevishini ezizimele, kungabikho emoyeni noma ngekhebula, noma iMovistar, noma iNetflix noma yini efana nayo, ngisho namamayela kude. Ngakho-ke kwakungekhona nje ukuthi amathelevishini ayelula njengoba kufanele abe ngaleso sikhathi, kepha izinhlobonhlobo zazilinganiselwe futhi, ngokuthembeka, kwakungakhathalekile ukuthi unayiphi i-TV, Ngalokho ababekukhombisa ku-TV!
Kepha iminyaka isihambile, ubuchwepheshe buvele futhi Manje, ukuze uphumelele lapho uthenga ithelevishini, ucishe wenza izifundo ze-master, nemikhuba ifakiwe. Isikrini se-LCD noma se-OLED? Isikrini esigobile noma esiyisicaba? I-HD, i-4K? Ukuxhumeka kwe-inthanethi noma okungenakho? I-Smart TV? Futhi kuthiwani ngezixhumi? Yiziphi izixhumi okufanele zibe nazo futhi hlobo luni? Noma kunjalo, isiphithiphithi sangempela ukuthi namhlanje sizozama ukubeka ukuhleleka ngalokhu amathiphu wokuthenga i-TV enhle.
1 I-LED noma i-OLED? Nanku umbuzo
2 Usayizi nokulungiswa
4 Isikrini esiphansi noma isikrini esigobile
6 Ipulatifomu ye-Smart TV
I-LED noma i-OLED? Nanku umbuzo
Ukukhetha iyiphi i-TV okufanele uyithenge, sizoqala ngokuqonda uhlobo lwephaneli i-TV yethu entsha ezoba nayo, i-LED noma i-OLED. Ngendlela yokuhlangana, singasho ukuthi ubuchwepheshe be-OLED yinto efana ne- «supervitaminated LED». Umehluko omkhulu phakathi kokunye utholakala eqinisweni lokuthi Amapaneli e-OLED awasebenzisi izinhlelo zokukhanyisa emuva esikhundleni salokho, bayakwazi ukuvula futhi bacishe ngamunye wamaphikseli ngawodwana, okuhumushela ku- ukugqama okungcono, umbala omkhulu we-gamut, umsulwa, omnyama kakhulu futhi ongokoqobo, imininingwane emikhulu yesithunzi….
Ngakolunye uhlangothi, ama-TV anamapaneli we-OLED anjalo mncane futhi ulula noma kunjalo, banezithiyo ezithile ezinkulu:
OLED TV zibiza kakhulu kunamathelevishini e-LED, intengo eshibhile iphakathi kuka-1500 no-1700 euros, ngaphandle kokunikezwa, kunjalo.
Azikho amamodeli amancane kuno-55 inches Ngakho-ke, uma udinga noma ufuna i-TV encane, ngeke ukwazi ukukhetha lobu buchwepheshe.
Noma kunjalo uhlushwa isithombe "sokuzithokozisa" noma "ukusha" lapho isithombe esimile sivezwa isikhathi eside kakhulu, ngakho-ke akubona neze abaqokelwe okuhle uma uzosisebenzisa ukuxhuma ikhompyutha yakho.
Lapho uthenga i-TV entsha, ikhwalithi yesithombe nosayizi wesikrini kubalulekile, zombili zihlangene, futhi maqondana nendawo lapho kuzobekwa khona ithelevishini yethu kanye nebanga lapho sizobe sibuka khona i-TV. Kepha asihambe ngezingxenye.
Iningi lethu lilingeka ukuba lithenge ithelevishini enkulu kunazo zonke laphaya, inqobo nje uma lingena egumbini lokuphumula noma ekamelweni lokulala, futhi ngesinqumo esiphezulu kakhulu. Noma kunjalo, ukulungiswa, ubukhulu nosayizi wokubuka kumele kuhambisane. Mayelana nalokhu singathola inqwaba yemibono, eminye isisekelo kuneminye, kepha sizothatha izinkomba ezinikezwe yi I-Society of Image Motion kanye Nezinkampani ZethelevishiniNgithini ukuthi kukhona okuzokwazi ngalokhu:
Okomabonakude abanesinqumo HD Full (1920 × 1080 pixels), ibanga lokubuka kufanele libe phakathi kokuphindwe kabili noma kahlanu ububanzi besethi.
Okomabonakude abanesinqumo UHD (Amaphikseli angama-3.840 × 2.160) noma 4K, ibanga lokubuka liyingxenye, okungukuthi, liphakathi kokulingana nobubanzi be-TV uqobo kanye nezikhathi ezi-2,5 leso silinganiso.
Ngakho-ke, kufanele sibheke isikhala esizofaka kuso ithelevishini yethu entsha, ukuze ikulunge nokuthi ikude kakhulu ngokusho kokuxazulula kwayo.
Ngaphezu kwalokho, kuyalulekwa futhi ukuthi unake i- angle yokubuka kodwa, uma ngikhuluma iqiniso, ubani njalo obuka i-TV endaweni efanayo nasendaweni efanayo? Kwesinye isikhathi ngilele kusofa, ngakolunye uhlangothi noma kolunye uhlangothi, noma esihlalweni sengalo, esisemaphethelweni kasofa owodwa, futhi angikutsheli nokuthi kukangaki ngihlasimula ngihleli esihlalweni. Ngakho-ke ake sidwebe isembozo esiwugqinsi kuso futhi singazicindezeli ngokweqile.
Lapho uthenga ithelevishini yethu entsha, kubalulekile ukuthi sibhekisise el uhlobo lokuxhuma onalo nenombolo yalo, ngeke kube ukuthi kamuva sifuna ukuxhuma isidlali se-DVD futhi sisele nesifiso.
Okokuqala, hamba phezu kwamadivayisi onawo ngasendlini ofuna ukuwaxhuma ku-TV yakho entsha. Ngokuzimisela, kwenze, ngoba sihlala sikhohlwa okukodwa.
Ake siqale nge Izimbobo ze-HDMI, kubalulekile ekuxhumeni amadivayisi njengekhompyutha, i-Apple TV, iChromecast namanye, kodwa nesidlali seBlu-Ray, isibonelo. Ngenguqulo 1.4 sesivele siphelile, kodwa-ke, uma ukhetha ukulungela ikusasa, hlola ukuthi inesixhumi yini esihambisana ne-HDMI 2.0a kanye naku-HDCP 2.2 evikelwe ngokulindelekile.
Kepha InternetCabanga ngokusetshenziswa ozokunika kona, futhi uma kuzoba kukhulu kakhulu noma cha. Kwi-Full HD TV kuzokwanela ngesixhumi se-Ethernet ku-100 Mbps noma uxhumano lwe-WiFi N lwama-150 noma ama-Mbps angama-300. Kepha uma ufuna ithelevishini ye-4K futhi uzobona nokuqukethwe okuningi kule khwalithi, okungcono kakhulu ukuthi izimbobo zokuxhuma yiGigabit Ethernet, nokuxhumeka kwe-WiFi, i-AC.
Ah! Futhi ungakhohlwa ukuthi ikwenzile Amachweba we-USB ukuxhuma i-pendrive noma i-hard drive yangaphandle nama-movie wakho, kodwa futhi nemikhawulo efana nekhibhodi, igundane ...
Isikrini esiphansi noma isikrini esigobile
Sesivele sikhethe ubuchwepheshe bethelevishini yethu entsha, nobukhulu nokulungiswa kwesikrini sayo futhi, siqaphele ukuthi inakho konke ukuxhumana esizokudinga, ngakho-ke ubukhulu bezinketho buyancipha futhi manje izokwenza okungaphezulu uma sikhetha phakathi kwesikrini esiyisicaba noma isikrini esigobile.
Amathelevishini wesikrini agobile azodonsela ukunakwa kwethu ngokushesha nje lapho siphambi komnye wawo. Ngokwethiyori, isipiliyoni singcono kakhulu; izinga lokucwiliswa kokuqukethwe likhulu ngoba ibanga eliphakathi kwamehlo ethu nedivayisi lihlala lifana ngaso sonke isikhathi, kunjalo, uma sihlala sihlobene nendawo enkabeni yethelevishini. endaweni ngayinye yepaneli. Futhi kulapho-ke lapho eyodwa yamaphuzu ayo abuthakathaka ilele khona: uma sibhekene nohlangothi olulodwa lwesikrini, ikhwalithi yesithombe ngeke isafana Futhi lokhu, bangani, kujwayelekile, ngaphandle kokuthi sihlale sibuka iTV sisodwa.
Ngakolunye uhlangothi, ukucabanga kukhulu ukwedlula esikrinini esicaba, ikakhulukazi lapho ukukhanya kuvela kolunye uhlangothi.
Ngakho-ke, Ngaphambi kokukhetha i-TV egobile, kufanele ucabangele ibanga ozoyibona ngalo, ukusuka lapho isibani sizofinyelela khona, nokuthi uzoyibona wedwa noma uhamba nabantu abaningi.
Ngiyavuma ukuthi angiyithandi kakhulu i-3D, okungenani hhayi i-3D abazama ukusithengisa ngayo namhlanje. I- ukushoda kokuqukethwe ikhwalithi, ukulahleka kobukhali ezimweni eziningi, i- ukungahambelani phakathi kwamafomethi futhi-ke, ezinye ngezinye izikhathi amanani abehabaOkubaluleke kakhulu ukucabangela lokhu okungenhla, bayangivumela ukuthi ngincome ngqo ukuthi UNGAYI ukuyofuna i-3D TV ngoba empeleni, ngisho nekusasa layo liyinkinga okwamanje.
Ipulatifomu ye-Smart TV
Futhi angiwathandi kakhulu amathelevishini anepulatifomu ye-Smart TV edidiyelwe ngoba, yize kube nentuthuko, basona ngendlela ethile. ukuhamba kancane, iqalisa kabusha, izinhlelo zokusebenza ezithatha impilo yonke ukulayisha, ukuvalwa okungalindelekile, ukungavumelani nemisebenzi, ekugcineni, evame ukudumaza. Iseluleko sami ukuthi uthenga i-TV "engahlakaniphile" bese uyiphelezela nge-Apple TV noma i-Chromecast noma okunye okufana nalokho, kuya ngokuthanda kwakho nezidingo zakho.
Noma kunjalo, namuhla, amapulatifomu amakhulu yiFireFox OS, i-webOS, iTizen futhi kunjalo, i-Android TV.
Ukhiye usekuthini leplatifomu ye-Smart TV isetshenziswa kanjani kuthelevishini yakho futhi, kusobala, yihadiwe eliyishayelayo. Kodwa-ke, cabanga ngento eyodwa: uzosebenzisa ithelevishini yakho entsha okungenani iminyaka emihlanu noma eyishumi ngakho-ke, noma iyiphi ingxenyekazi oyikhethayo, izokushiya ulenga futhi azikho izibuyekezo iyahambisana ngaphambi kokuthenga i-TV entsha.
Ngakho-ke sifika ekugcineni kwezici okufanele sizicabangele lapho uthenga ithelevishini entsha; Okokugcina ngokubaluleka ngoba umsindo ubaluleke njengevidiyo ukujabulela ngokugcwele i-movie enhle.
Ngokuncipha okuqhubekayo kwamapaneli, futhi ubukhulu bezipikha bancishisiwe (kusuka ku-4, 5 noma ngaphezulu amayintshi kuya kuma-2,5 noma ama-intshi ama-3 wesitobhi samanje). Umphumela usobala: umsindo awuphilile, futhi ishoda ngamabhasi, umsindo uhlanekezekile lapho siphakamisa umsindo. Futhi noma ngabe iseva ingeyona yendlebe enhle, iyakhombisa.
Ngenxa yalokho, isisombululo esihle kunazo zonke kule nkinga esabalele ukuthi ake sigcine ingxenye yesabelomali sethu ukuthenga isistimu yomsindo, umbhoshongo womsindo, ibha yomsindo, kanye nohlelo olungenantambo nge-WiFi noma nge-bluetooth. Kunezinketho eziningi, eziningi futhi ezisezingeni elihle kakhulu. Futhi ukwenza isiqiniseko sokuthi awunazo izinkinga, sibuyele emuva ekukhulumeni ngokuxhumeka futhi sincoma ukuthi uqiniseke ukuthi i-TV yakho entsha inokukhishwa komsindo okubonakalayo, i-analog RCA ne-HDMI ARC, ngakho-ke uzoba nezinketho eziningi kakhulu ongakhetha kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Ama-TV » Iyiphi i-TV ongayithenga (amathiphu wokukhetha kahle)
U-Antonio Pisa kusho
Ngisithanda kakhulu isihloko esibukwayo, ngine-TV ye-Samsung 4k ne-projektha yencazelo ephezulu, kufanele ngithi okungcono kakhulu yi-projektha enhle kepha ixhunywe kwikhompyutha enekhadi lemidwebo elihle kulokhu isikrini singama-80 amasentimitha, Kusuka kokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi, umbono omuhle kakhulu ukubeka i-TV noma isikrini ekhoneni elingaphezu kwama-degree ayi-180, kepha QAPHELA, indlela engcono kakhulu yombono ukubeka isibani noma izibani ngemuva kwe-TV noma iphrojektha, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe , kuyindlela engcono kakhulu eya ebuchosheni namehlo ashintshiwe futhi isibani sangaphansi cishe lapho sihleli khona sinokukhanya okufudumele, ukuthi uma kungadingeki ubone izibani, yenza isivivinyo.
Phendula ku-antonio pisa
Iseluleko esihle kakhulu! Futhi kunzima kakhulu. Kuzofanele ukuthi ivivinywe. Ake sibheke ukuthi ngabe isiphi iseluleko esengeziwe esivela kubafundi siyawa futhi siqedela okuthunyelwe. Ngikufisela okuhle!
UPiccolo Nene kusho
Izeluleko ezinhle kakhulu, ngiyabonga ngale ndatshana.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngasekupheleni kuka-2017 awekho amathelevishini e-OLED amancane kunamasentimitha angama-55?
Phendula uPiccolo Nene
Siyabonga ngokuvakashela ibhulogi yethu. Sethemba ukuthi lawa macebiso ayasiza. Ngikufisela okuhle!
I-TSMC ilungiselela ukukhiqizwa kwe-chip ye-3nm
Isikhumulo sezindiza saseDubai sizoba nomgwaqo okhetheke kakhulu wokuphepha